﻿ कान चिलाइरहन्छ ? यसो गर्नुहोस्
कान चिलाइरहन्छ ? यसो गर्नुहोस्
कहिलेकाहीँ कान चिलाउनु सामान्य हो । तर, कानको भित्री भाग बारम्बार चिलाउँछ भनेचाहिँ हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुँदैन । हामी प्रायः कान चिलाउँदा कन्याउन हातका औँला प्रयोग गर्छन् । यति मात्रै नभएर कानभित्र सिन्का, सिसाकलम, कनकर्नु, सलाइका काटी जस्ता तीखा वस्तु पनि घुसार्छौँ ।
लशुनः लशुन हाम्रो भान्सामा सजिलै पाइने खाद्यवस्तु हो । यसका सयौँ गुण छन् । लशुनमा एन्टिबायोटिक गुण पनि हुन्छ । जैतुन र तिलको तेलमा एक केस्रा लसुन फुराई कानको बाहिरी भागमा लगाउनाले कानलाई इन्फेक्सनबाट बचाउन सकिन्छ ।